एकजनाको छवि ... कति पटक विभिन्न व्यक्तिहरू लिइएका छन् र यसको कवरेज उठाउँछन्? सायद शायद सैकड़ों हजारौंहरू पनि होइनन् (सम्भवतः स्कूल पाठ्यक्रम र उच्च शिक्षाको विशेष निर्देशनहरू)। सम्भवतः, लाखौं पटक रसिया र विदेशीहरूले तिनको बारेमा लेख्न खोजे। यो प्रतिमात्मक छविले मात्र यसको कला र सौंदर्यशास्त्रलाई समेट्छ; उहाँले एक पटक साँच्चै उन्नीसवीं शताब्दीको शुरुवाती शुरुवातको शुरुवातलाई प्रेरित गर्नुभयो जुन सोशल र औद्योगिक प्रगतिको उच्च सडकमा सोशल विकासको बहादुरीबाट बाहिरियो।
Pushkin को काम मा "युगिन एक्जिन्ग" राख्नुहोस्
म अलेक्जेन्डर सर्गेभिच पुष्किनको शब्दहरू सम्झन्छु: "मैले आफैंले बनाएको कुनै स्मारक बनाएको छैन ..." क्लासिकले सात वर्षको कामलाई उपन्यासमा "युग्ने वनिन" मा एक क्लासिक मानिन्छ। यो माथिल्लो संसार सहित "वरिपरि रूसी कवितासस" मा, वरिपरि रुसी समाजको एक अत्यन्त इमानदार दृष्टिकोण थियो। उनले आफ्नो पुस्ताको बारेमा लेखे, र यसले उनीहरूलाई बल दिए ... पहिलो पटक स्थानीय साहित्यिक लेखक यथार्थवादको गोल्थोमा उभियो र इमान्दारी र अत्यधिक कलात्मक प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास गरे जुन रूसको सबैभन्दा उन्नत व्यक्तिमा चिन्तित थियो। यो उनको मनपर्ने रचना थियो। खास गरी उहाँ पुशकिनले एक विशेष "वनस्पति" स्टेनजा - 14 -लेटेटेड आईम्बाको 14 वटा रेखाहरू कविताले CCddEffEgg को अनुसार कवितामा आविष्कार गरे।
प्रारम्भिक XIX शताब्दी को महानता को प्रदर्शन मा उद्देश्य
अलेक्जेन्डर सेगेभिच, यथार्थवादका सिद्धान्तहरू, इमान्दारीपूर्वक र स्पष्ट रूपमा देखाइयो कि राजाहरूको सामाजिक तह वास्तवमा - रूसी शक्ति प्रगतिको ड्राइभिङ्ग बल बन्दै गयो। पछिल्लो शताब्दी को महानता - जो लोग क्याथरीन को युग मा बनाइयो, जसमा गर्म रगत देख्यो र पतन र कार्य को काम गर्न को निर्धारण गर्न को लागी। यो अठारहौं शताब्दीको सुनौलो उमेरमा रूसको महिमाको विजय र अनुमोदनको लागि यो एक महिमित समय हो। अफिसको दायरामा सेवाले अबतात्वलाई आकर्षित गर्दैन। उच्च संसारका प्रतिनिधिहरूले रेनमार्क र पुरस्कारको लागि दौड लिए। तिनीहरू उत्साहपूर्वक विभिन्न व्यंजनहरू, भित्तामा संलग्न हुन्छन्। प्रायः महानगरहरूले व्यक्तिगत भलाइ र उनको व्यक्तिगत जीवन समाजको हितभन्दा माथि राखे। यसको अतिरिक्त, तिनीहरू सर्फिड संरक्षणमा रुचि राख्ने मुख्य राजनीतिक शक्ति थिए। सबै पछि, लाखौं मानिसहरूको दलितहरूको शासन गर्ने अधिकार थियो जसले राज्यमा आफ्नो प्रभावको आधार बनायो।
निष्क्रियता एक शुरुवात - उच्च समाज शिक्षा को एक उत्पाद
यूजीन वनिन शुरुआती XIX शताब्दी को महानता सम्पदा को अर्को, अकुशल उत्पादन को एक प्रतिनिधि हो। एकजना अतीतमा एक अधिकारी हो, तर उनी निराश भएका थिए र छोडेर (पुष्किन अनुसार, उनी बोरिन्छन् "र कसमरी, र सबर्स, र नेतृत्व")। राजाको नजिकको समाजको तह सिर्जना गर्ने विचारको रूपमा बुबाल्याण्डलाई सेवा दिँदै, सुनको XVIII शताब्दीको विशेषता, सय वर्षपछि पार्थिवको लागि प्रासंगिक छ। यद्यपि तिनीहरू त्यतिबेला धेरै शिक्षित व्यक्ति थिए।
यो ठीक छ के पाठकहरूले Onegin को अत्यन्त ईमानदार छवि बुझ्न मद्दत गर्दछ
पुष्किन को प्रयास, शब्द को यो अद्भुत मास्टर, यूजीन को छवि बनाउन, कब्जा गर्न को लागी, पाठकहरु लाई रूस को शिक्षित युवाहरु देखि विशिष्ट समकालीन विशेषताहरु लाई ल्याउन को लागी, जसमा बल उबल रहे हो, विचारहरु को चमक, जो अंततः निश्चित पूंजी र कनेक्शन छ, केहि प्रगतिशील र आवश्यक महसुस गर्न। यद्यपि, यो निष्क्रिय छ। उनले वरपरको जीवनको बुद्धिमान निरीक्षकको भूमिका लिइन्, र यो सहभागी होइन। उहाँ केही संगमरमर केटाको अन्डरसनको परी कथा लिटिल मत्स्यस्त्रीको सम्झना छ। उनको आकर्षण, सुन्दरता र दिमाग ठण्डै छ। सायद, यसैले, Onegin को छवि दुखाइ छ ...
यूजीन के गर्न सक्छ?
आफ्नो आर्थिक ज्ञानको साथ यो व्यक्ति, ऐतिहासिक परिस्थितिमा आधारित, वास्तवमा सेना संग धेरै गर्न थियो। रूसको अर्थव्यवस्था पछि लुकेको थियो। त्यहाँ कुनै रेलवे थिएनन्। पूंजीवादी उद्यमहरू एक जटिल राज्यमा थिए। सेफोमले एक विशाल देशको मानव संसाधनलाई बाधा दिए। तथापि, यो निष्क्रिय छ र, कत्तिको हिसाब छ, समाजले यो महत्त्वपूर्ण कार्यहरू समाधान गर्न (यो एक व्यक्ति, निस्सन्देह, सबैभन्दा अग्रणी) धक्का वा गतिमा गर्दैन। रूसी समाज अमूल्य छ, यो उच्च संसारको प्रभावलाई हटाइएको छ। युवाहरू, युरोपमा शिक्षा प्राप्त गर्दै (अधिक ठीक, समर्थक-फ्रांसीसी), पूर्ण सुरुवात देखि सामाजिक रूपमा पूर्णरूपमा! यो कृत्रिम, महाकाव्य, उच्च समाज को एक विश्व, कितना गहिरो चूसने चूस्यो, रूसी वास्तविकता देखि तलाक भयो!
डेमब्र्रिस्ट आंदोलनको अपराधी दमन
र उच्च दुनिया, ठूलो मात्रा मा, निजी स्वार्थी हित को विशेष व्यक्ति को अधीन छ। हामी देख्न सक्छौं, सर्कल बन्द छ। यो "चाल - 22"! के यो डेमब्रिस्ट आन्दोलनको निर्माणको लागि प्रेरणा थिएन? प्रगतिशील विचारको उत्साहको जवाफमा, सम्राट निकोलस म, र त्यसपछि अलेक्जेंडर आई (उत्तीर्ण, एक कम हदसम्म) ले पुलिस शक्ति निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ, रुसको रूसको हितको लागि एक योजना। यस प्रकारको राज्यको पीडित पुष्किन थियो, दक्षिणी निर्वासनबाट निस्कियो। "एकजना" कवितामा उपन्यास, कविको दक्षिणी वनस्पतिमा ठीकै सिर्जना गर्न थाल्नुभयो, साथीहरूलाई धन्यवाद, "साइबर रोकिने रूसमा" उल्लेखनीय पदहरूको लागि साइबेरियाको बाँकी सजायलाई नरम गरेर प्रतिस्थापित गरियो।
पुष्किको उपन्यास परिवर्तनको हानिकारक हो
आउनुहोस् हामी कुन प्रकारका शब्दहरू प्रोफेसर टोलिकीले लेखिएको प्रसिद्ध त्रयी सुरु हुन्छ। यो एक रोमाञ्चक सोच संग सुरू हुन्छ कि सारा संसारमा परिवर्तनहरू छन्, यसका सबै तत्वहरूमा, यी परिवर्तनहरू नजिक छन्, कि तिनीहरू आउनु हुन्छ।
यसले हामीलाई जस्तो देखिन्छ कि अलेक्जेन्डर सेगेसेविचले पहिले नै आफ्नो उत्कृष्ट कामको सृष्टिको पूर्वमा पनि महसुस गर्यो। व्यक्तिका लागि चालीस लाखौं रूसको आवश्यकतालाई व्यक्त गर्न र व्यक्त गर्ने माध्यमको अर्थ 1 9औं शताब्दीको सुरुमा अक्षांशको ओपन, रूसको एक प्रतीकात्मक कलात्मक र यथार्थवादी काममा रहेको चित्र थियो।
Pushkin उपन्यास अप्रचलित serfdom मा एक शक्तिशाली बौद्धिक झटका थियो।
"एकजना" एक लोकप्रिय काम हो
पुष्किनको काममा एक अधिक पहल छ। अलेक्जेन्डर सर्गेभेच "यूजीन वनिन" को लागि उनको मनपर्ने काम थियो। कवि, आफ्नो नायक को रोमांच पछि पछी, रूसी राज्य को एक अत्यंत विस्तृत चित्र बनाइन्छ। पुस्तकमा हामी माथिल्लो संसारको क्यारेक्टरहरू र स्थानीय महानगरहरू र किसानलाई भेट्दछौं। समाज को सबै तहहरु को वास्तविक प्रदर्शन को अतिरिक्त, अलेक्जेंडर सेर्गीनेविच स्वाद, उस समय को फैशन, सामाजिक विचार को रुझान को प्रदर्शन गर्दछ। यही कारण, लेखकको एक मित्र पीटर पुलेटनेभ, उपन्यास एक "जेब दर्पण" र विसेरियन ग्र्रिगुइयुइच बेलिन्स्की भनिन्छ - लोक को उच्चतम स्तर को एक उत्पाद। अनि यो तथ्यको बावजुद उपन्यास मा वनिनको चित्र उच्च विश्वमा बाँधिएको धेरै सम्बन्धमा छ। एकै ओर, उनीहरूले त्यसलाई त्यागेर, आफ्नो अधिवेशनलाई बेवास्ता गर्दै, स्पष्ट रूपमा पाठकलाई देखाउँछन् कि "त्यहाँबाटै" मानिसहरू बुबा ज्ञानको लागि वा बेल्जल्याण्डको लागि निस्वार्थ श्रममा भिन्न छैनन्। र अर्कोतर्फ, उनी तिनका राय र आकलनलाई पूर्ण रूपमा पूर्णतया उहाँलाई बाट टाढा लैजान सक्दैन। अलेक्जेन्डर सर्गेदेचले आफ्नो नायकको बारेमा लेखे, कि उच्च समाज "उदासीन ... उनको पछि भाग्यो ... एक विश्वासी पत्नी जस्तो।"
वनजग्गा एक सभ्य महानगरीय बन्छ
हामी उपन्यासको शुरुवातमा यूजीन संग जान्दछौं, जब 191 9को जाडोमा एक गरीब महानगर, अचानक मृतक भूमि मालिक, उनको चाचा को वारिस हुन्छ। पुष्किको उपन्यासमा एकजनाको चित्र, फ्रांसीसी ट्युटरले ल्याएको छ, जो सबै आफूलाई मायालु प्रेमको लागि बेवास्ता गर्दछ: रूसी भाषा, रूसी प्रकृति, लोक संस्कृति, लोकगीत। उहाँले धाराप्रवाह फ्रान्सीसी बोल्नुहुन्छ, दयालु कुरा गर्न सक्षम छ, "निविदा जुनूनको विज्ञान" मालिक हुनुहुन्छ। अलेक्जेन्डर सेर्गेईभाइचले Onegin को थिएटर र रेस्टुरेन्टको भ्रमणको बारेमा एक कथालाई चित्रण गर्दछ।
विरासत को गोद लेने देखि पहिले , उनले आफ्नो सर्कल को युवाहरु को लागि सामान्य जीवन को नेतृत्व गरे, यो सैलून, बल, दलों, थिएटरहरुमा खर्च। यद्यपि, सैलान नैतिकहरूसँग उहाँ निराश हुनुहुन्थ्यो। उनी निमन्त्रणाबाट बच्न थाले।
पुष्किको उपन्यासमा एकपल्टको तस्बिर एक प्रकारको शिक्षित महानलिमान हो जसले सर्फमा भ्रष्ट प्रकृतिको बारेमा जानकारी दिन्छ। यो एक ठंड तार्किक दिमाग र आत्मा को महानता द्वारा प्रतिष्ठित छ। यो विशेषता हो कि त्यो सम्पत्ति को कब्जे मा प्रवेश गरे, उनले कोर्नी को ठाँउ गरे, जो किसानहरु को लागि "फेफड़ों मा एक ढक्कन" को लागि मुश्किल थियो। यद्यपि, किसान किसानको सक्रिय मालिक हुनुहुन्न। सत्तारूढ वर्ग को एक विशिष्ट प्रतिनिधि को रूप मा, त्यो समाज को लागि उपयोगी छ कुनै पनि काम को लागि सबै भन्दा कम आवश्यकता को महसुस गर्दैन। साहित्यिक काम गर्न प्रयास गर्दै, तिनले चाँडै यो व्यवसायलाई ठोक्थे, जस्तै पुष्किले तातोपानीमा लेखे। एकजना, एक स्थानीय सैनिक बन्नु, एक महान मानिस बनी। सबै अघिल्लो शिक्षाले कुनै पनि क्रियाकलापको लागि युगेन अनुकूलनलाई इन्कार गरेन। उनको लागि, जनता को सामान बनाउन को जीवन को पूरी तरिका विदेशी छ, रुचि को कारण छैन, र यसलाई सक्रिय मा भाग लेने को इच्छा पनि। यो असाधारण, गहिरो दिमाग, ग्रीक नायक एन्टियस जस्तै, आफ्नो देशी भूमिको सम्बन्धबाट निस्केको छ, जीवनमा कुनै पनि उद्देश्य बिना शक्ति रहित र बेकार देखिन्छ।
यो गाँउमा यवेन्जीको बसोबास भएको थियो जुन उनको चरित्रले आफूलाई चित्रण गर्यो। एकै ओर, उहाँले खाली र सीमित भूमिगत मालिकहरूको समाजलाई बचाउनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, जस्तै एकजग्गाको विश्लेषणको रूपमा, उनीहरूले प्रेमको परीक्षण खडा गर्दैनन्।
उपन्यासको मुख्य पात्रको आन्तरिक विरोधाभासताले प्रायः प्रायः उनको सम्बन्ध टाटाना लैरिनामा देखाएको छ। तित्यले आफूलाई अलेक्जेन्डर सर्गेभिचको लागि सबैभन्दा प्रिय पात्र, जुन उनले सिर्जना गरे। उनले, उपन्यासहरूमा ल्याए, यूजीन "रोमी" मा रोमान्टिक नायकको प्रकारमा देखा पर्यो र ईमानदारीसाथ उहाँसँग प्रेम भयो। सन् 1920 को गर्मीमा लिखित मान्यताको पत्र, मानव भावनाहरूको साहित्यिक अभिव्यक्तिको उत्कृष्टता हो।
यो मान्यता पाउन सकिन्छ कि उपन्यास "युगिन वनिन" मा महिला चित्रहरू र विशेष रूप देखि टाटाटा लैरिना, उपन्यासका नायक भन्दा बढी प्राकृतिक छन्, वास्तविक व्यक्तिको वास्तविकताबाट अलग रहन्छन्, उनीहरूको प्रतिबिम्बमा बढ्दो। त्यो, नायकको विपरीत, त्यस्ता व्यक्तित्वहरू छन् जुन संसारको मानिसहरूको धारणाको नजिकता, ईमानदारी। रोशनीको शोर र हलचलले उनीहरूलाई "अनुहार भित्ता" बोल्छ। विस्सारियन बेलिन्स्की तातियानाको चित्रमा "रूसीता" को यो प्रदर्शन भनिन्छ (जुन यूजीनमा पूर्णतया अनुपस्थित थियो) - एक फीचर।
वास्तवमा, पकिङ्क तात्ते कलाको कलामा, मानिसहरू र महानताका प्रतिनिधिहरूको विरोध गर्नुपऱ्यो, तर सिद्धान्तमा सम्बद्ध थिएनन्।
मित्रता संग परीक्षण
साहित्यिक नायक Onegin "प्रत्यक्ष महानता द्वारा आत्मा को अलग"। जस्तै पुष्कि उनको बारेमा लेख्छन्, यूजीन एक "दया साथी" र उनको व्यक्तिगत मित्र हो। यसबाहेक, एक दृष्टान्तमा उहाँ आफैले उपन्यासमा चित्रण गर्नुहुन्छ, उनी आफैलाई नेकिन्कीको अर्कोतिर नेस्की ब्रिजको रेलिङमा देखाउँछन्। एभरेनी आफ्नो आत्माले आफ्ना साथीहरुसँग जोडिएको छ। एक उदाहरण उनको व्लादिमीर लेन्स्की, उत्साही अठारह वर्षीय कवि संग उनको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हो। उनले, जर्मनीमा शिक्षा प्राप्त गरिसकेको थियो, रोमान्टिकवादको भावनाको साथमा राखिएको थियो। एक कवि हुनु, उहाँ ऊर्जावान हुनुहुन्छ, बिस्तारै उत्साही कविताहरू रचना गर्दछ। तथापि, "Onegin" को विश्लेषणले यो मित्रता उच्च विश्वको कानुनी कान्छामा पाइन्छ। बल र पार्टीहरूमा सुखद स्वादको साथमा, साथै एक-अर्काको मित्रतापूर्ण सल्लाह साझेदारी गर्नुको साथै, यो मित्रता प्रत्येक युवाहरूको एक विशाल अहंकारको लागी छ। यो अत्यन्तै सम्भव छ र आपसी आकस्मिक पोषण गर्दछ, र केही नम्र र अस्थायी असुविधाको लागि मित्रलाई बदला लिनको मौका।
प्राथमिक आम ज्ञान को दृष्टिकोण देखि धेरै मूर्खता 14 जनवरी, 1821 को Duel of Onegin और Lensky की कहानी है, जो बाद के लिए दुर्भाग्य से समाप्त हो गया है। प्रकाश को अवधारणाहरु पछि, एक coward भनिने डरले, यूजीन Onegin द्रुत ढकाल मनको साथ समाप्त भएन। उपन्यास को नायक, निस्सन्देह, उनीहरु को सम्बन्ध को सुलझाने र हथियारों को सहारा नहीं गर्न सक्छ। माथिल्लो संसारको धब्बे बाहिरको अवधारणात्मक र अपर्याप्त पद्धति बाहिरबाट लागू हुन्छ।
डुबकी पछि युग्ने वन
1821 को जाडोमा एकजना एक यात्रामा जान्छ। त्यसैले यो duelists बीच स्थापित गरिएको थियो - छोड्न, त्यस पछि पछि, आगमनमा, गप्प्स सब्सिडी। र टाटायामा एकै समयमा विवाह गरिरहेको छ। 1823/1824 मा ओडेसामा ओडेसा (क्रोनोलोजी पकिङ्कको साथ रहन्छ। 1824-18 को शीतमा उनी सेंट सेन्ट पीटर्सबर्ग फर्किए।
यहाँ उहाँ टाटानासँग भेट्नुहुन्छ। उहाँ पहिले नै निष्कपट हुनुहुन्छ। उनको हृदय को बर्फ पिघलिएको छ। एभरेनीलाई प्रेममा वर्णन गरिएको छ ... तथापि, टुटिना अर्को हो ... परिवारको आमा, पति पत्नी, सुनारको रक्षक। उनको आत्माको आंदोलनमा, उनी आफ्नो परिवारको संरक्षणको लागि व्यक्तिगत जिम्मेवारी महसुस गर्छन्।
Pushkin ... एकजना ... टाटाटिया ... शब्द को महान मालिक द्वारा चित्रित भावनाहरु को एक अद्भुत तस्वीर!
पुष्किनको यूजीन ओरेन्जबाट, रूसी साहित्यले "समयको नायक" चित्रण गर्ने एक परम्परा छ। क्लासिक्स, अलेक्जेन्डर सेर्गेभिच पुष्किनको साथ शुरु भयो, उनीहरु को बारे मा सोच्न थाले - उहाँ यसका लागि एक साधारण व्यक्ति समाजको प्रगति निर्धारण गर्दै। Pushkin को नायक पछि, लेर्मोन्टोभको ग्र्रिरी अलेल्यान्ड्रोभिच पेचोरिन सार्वजनिक गर्नु अघि देखा पर्यो। Onegin र Pechorin को तुलनात्मक विशेषता यो थाहा छ कि तिनीहरू दुवै महानगर, उनीहरूको संदेह, धेरै सन्दर्भमा विश्वास नगर्ने - डिसेम्बर 14 को कार्यक्रम पछि रूसको घरेलु गोष्ठिमर नीतिको फल मानिसहरूको लागि अविश्वासको नीति हो। यी व्यक्तित्व दुवै को सार वरपरको वास्तविकता, आफूलाई पत्ता लगाउन र आफुलाई बुझाउने इच्छा विरुद्ध एक विरोध हो।
Onegin को छवि - Pushkin को काम को लागि एक चिन्ह। उनको सुन्दरता र कलाकृति प्रशंसा गरिएको थियो र प्रशंसा गरे। यो एक खैरो व्यक्ति होइन, त्यो एक बनावट गरिएको चरित्र हो। उहाँ गहिरो दिमागमा फरक हुनुहुन्छ, प्रक्रियाको वास्तविक उद्देश्य र भालाहरू विश्लेषण र निर्धारण गर्ने क्षमता। उहाँ मानिसहरूमा राम्ररी बोल्नुभएको छ। उपन्यासका विभिन्न छविहरू "यूजीन एक्नेजिन" उपन्यासको मुख्य पात्रको चुम्बकत्वले आकर्षित गर्न थाले।
यसको आत्मकथात्मक विशेषताहरू छन्। तथापि, कवि एकजुटले आफैलाई पूर्ण रूपमा सम्बद्ध गर्दैन। उहाँले यूजीन आदर्श गर्दैन, निहित क्षतिको संकेत गर्दै। उहाँले उसलाई उहाँको मित्रलाई बोलाउनुहुन्छ। उहाँ आफैले "लेखकको आवाज" सँग सहकार्य गर्नुहुन्छ।
पुष्किको उपन्यास, तपाईंलाई थाहा छ, अधूरो कार्यको साथ समाप्त हुन्छ। यसकारण, प्रत्येक पाठकलाई आफैले स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने अधिकार छ - युग्युन आफैले पत्ता लगाउन सक्छ वा जीवन जीउनेछ कि - लक्ष्यहीन।
लेम स्टेनस्लाव: उद्धरण, फोटो, जीवनी, ग्रन्थ, समीक्षा
कथा "विदेशी रक्त": छोटो सारांश। Sholokhov MA, "डनको कथाहरू"
क्यालोर डानवर - यो के हो?
एन्टिओक क्यान्टेमिर: जीवनी। एन्टिओक दिमितिचिक क्यानाटेयरको कार्य
चार्ल्स पेर्राल्ट: महान कथाकारको जीवनी
Bodiam महल, इङ्गल्याण्ड: आकर्षण, इतिहास, रोचक तथ्य
खण्डलाई: ज्वाला बाँधिएका। खेल ज्वाला द्वारा बाध्य: रिलीज मिति, प्रणाली आवश्यकताहरू
मनोरञ्जन कम्प्लेक्स Abzakovo। Waterpark "मछलीघर"
Kudryashov दिमित्री - रूसी बक्सिङ आशा
दृश्य बोर्ड: वास्तविकता परिवर्तन गर्न कला
सिवार अनुहार को मास्क: समीक्षा
भूमिकाको र फिल्म "Stalker" को अभिनेता (1979)